Xiddigaha Chelsea Oo Isku Dhacay Qaarkood Garoonka Tababarka - Warbixin
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXiddigaha Chelsea oo isku dhacay Qaarkood garoonka tababarka – Warbixin
Xiddigaha Chelsea oo isku dhacay Qaarkood garoonka tababarka – Warbixin
April 5, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Wararka ayaa sheegaya in tababaraha kooxda chelsea ee Thomas Tuchel uu tababarkii shalay ka cayriyay daafaca Antonio Rudiger kadib markii uu xidiga reer Germany isku dhaceen goolhaye Kepa Arizzabalaga.
Tuchel ayaa la kulmay guuldaradiisii ​​ugu horeysay ee tababaraha Chelsea kulankii West Bromwich Albion sabtidii. Tababaraha Jarmalka ah, oo ku baaqay xasillooni ka dib guuldaradii naxdinta lahayd, waxay ahayd inuu soo farageliyo Rudiger iyo Kepa garoonka tababarka. Rudiger aakhirkii waxaa laga diray tababarka 5 daqiiqo kahor.
Isku dhaca ayaa lagu soo waramayaa inuu dhacay ka dib markii Rudiger uu si qaldan ula tartamay goolhayaha Chelsea Kepa . Labada nin ayaa isku riix riixay ka hor inta aysan asxaabtu kala fogeyn.
Rudiger iyo Kepa, oo labadoodaba aan ku lug laheyn guuldaradii West Brom, kaliya ma aheyn saaxiibada Chelsea ee isku dhacay ka dib guuldaradii Sabtidii. Wararka ka imanaya The Telegraph ayaa soo jeedinaya in kabtanka Chelsea Cesar Azpilicueta uu sidoo kale muran kulul la galay Reece James qolka labiska ka dib guuldaradii 5-2 ee ka soo gaartay West Brom.
Chelsea ayaa weli ku jirta kaalinta afaraad ee kala sarreynta Premier League , Thomas Tuchel ayaana hubin doona in kooxdiisu ay diiradda saareyso ka hor kulamada adag ee muhimka ah.